NC ကြိတ်စက် KJ Series စက်ရုံ - China NC Milling Machine KJ စီးရီးထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
အကြီးစား Bridgeport ကြိတ်စက် 2000kg kg X Axis Travel နှင့်အတူအလေးချိန် 2000kg
အမည်: CNC ဒေါင်လိုက်စက်မှ 6KI X ဝင်ရိုး - ခရီးသွား - ၈၀၀mm Y ဝင်ရိုး - ၃၃၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံအချင်း - ၈၆ မီလီမီတာဇယား - ၁၂၇၀ * ၃၃၀ မီလီမီတာအရွယ်အစား - ၁၉၀၀ * ၁၇၅၀ * ၂၄၅၀ မီလီမီတာ ၈၀၀ မီလီမီတာ - X ၀ င်ရိုး CNC ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက် ၆ ကီလို ၂၀၀၀ ကီလိုအလေးချိန်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် - ၁ ။ အောက်ခြေ၊ လျှော၊ စားပွဲ၊ ကော်လံ၊ headstock အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အခြားအဓိကအပိုင်းများကိုသံသွ HT300 နှင့်ပြုလုပ်သည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအချိုးအစားရှိသောနံရိုးဖွဲ့စည်းမှုအတွက်သေတ္တာပုံစံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏အခြေခံသည်မြင့်မားသော flexural တင်းကျပ်မှုနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုယိုယွင်းစေသည်။
60 - 4200rpm CNC ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက် 430mm Spindle နှာခေါင်းကိုဇယားအကွာအဝေးအထိ
စားပွဲ: ၁၃၇၀ * ၃၃၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ခရီးသွားခြင်း - ၈၀၀ * ၃၃၀ မီလီမီတာ Rated Power: 5HP ဗိုင်းလိပ်တံ: NT40 T Slot - ၁၆ * ၃ * ၆၈ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း - ၆၀-၄၂၀၀rpm ၃ မိနစ်အထူးပြုလုပ်ထားသော NC ကြိတ်ခွဲစက် ၃ ခု။ nsk တိကျသောအဝိုင်းနှင့် Hsing Tong Xiang / Hong Tai ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဘောလုံး ၀ င်ပါ ၀ င်ခြင်း ၂။ အ ၀ န်းနှင့်အနေအထားကိုစက်ကိရိယာဖြင့် NC rotary table ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုအသေးစားပြုပြင်ခြင်းအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ ၄။ ပရိုဂရမ်တည်းဖြတ်မှုကိုဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင်တိုက်ရိုက်အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ အမြင့် ...
ကောင်းမွန်သောဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောစွမ်းရည်အားဖြင့် Universal Compact Benchtop Mill တူးစက်
အမည်: CNC စက်စက် 4KJ-BX ဝင်ရိုးတန်း: ၇၁၀mm Y ဝင်ရိုးတန်း: ၃၄၀mm Z ဝင်ရိုးတန်း - ၁၀၅ မီလီမီတာ Rated Power: ၂.၂kwkw ဗိုင်းလိပ်တံကျုံ့: R8 သို့မဟုတ် NT30 2.2kw Power ဒေါင်လိုက်ဒူးခေါင်းအမျိုးအစား CNC ကြိတ်စက် 4KJ-B R8 ဗိုင်းလိပ်တံကုမ္ပဏီကုမ္မဏီ: ၁။ JOINT သည်တရုတ်ပြည်တွင်အမြဲတမ်း ဦး ဆောင်နေသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိတ်စက်၏သုတေသနနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသည် JOINT ၏ရှေ့ဆောင်ဖြစ်သည်။ JOINT ကိုလိုက်နာပြီးလူသိများတဲ့စက်တံဆိပ်အနည်းငယ်ကို Hvae စက်ရုံများစတင်ပါပြီ ...
စီဒီစီမှဒေါင်လိုက်စက်စက်၊ ၈၆ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်စက်ကွန်ပျူတာစက်
စားပွဲတင် - ၁၂၇၀ * ၂၅၄ မီလီမီတာ X / Y / Z ခရီးသွားခြင်း - ၇၄၀ * ၃၃၀ * ၈၆ မီလီမီတာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စွမ်းအား - ၃HP ဗိုင်းလိပ်တံ: NT30 / T ကဒ်အထိုင် - ၁၆ * ၃ * ၆၅ မီလီမီတာအတိုင်တံ၏အချင်း - ၈၆ မီလီမီတာမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သော 3HP CNC ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက် 4KI အစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ခြင်းအတွက် 1. မွေးစား Fanuc ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် KND ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ၂။ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်နေရာချထားခြင်းစက်ကိရိယာကို NC rotary table3ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ Z axes servo motor motor ဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်း၊ ၄။ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင်တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်ခြင်း ၅ ။ ပေါင်းစုံအတွက် ...
1500 * 1700 * 2150mm ဒေါင်လိုက်ဒူးထောက်စက်အမြင့်လှည့်ဖျားလှည့်မြန်နှုန်း
အမည်: CNC စက်စက်ဝိုင်းဇယား - ၁၂၇၀ * ၂၅၄ မီလီမီတာ X / Y / Z ခရီးသွားလာခြင်း - ၇၁၀/၃၄၀ / ၁၀၅ မီလီမီတာ Rated Power: 3HP ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: R8 / NT30 လျင်မြန်သောအစာ: ၅/၅/၄ M / min 4KJ-B ဒူးအမျိုးအစား NC အသိဉာဏ် စက်ရုံစျေးနှုန်းနှင့်အတူအသေးစား cnc ကြိတ်စက် ၁။ windows xp platform ကို အခြေခံ၍ ပူးတွဲအသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်သူကိုအသုံးပြုသူများပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၂။ Z axes servo motor မောင်းနှင်မှုဖြင့်စက်သည် Z axes အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သောမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုသိရှိနိုင်သည်။ ၃။ X / Y / Z ၀ င်ရိုးများသည် ball screw ကိုအသုံးပြုသည်။
အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်စက် CNC ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက်, သံသွန်းလက်စွဲစာအုပ် CNC စက်
စားပွဲတင်: ၁၃၇၀ * ၃၃၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ခရီးသွားခြင်း - ၈၂၀ * ၃၁၀ * ၁၁၅ မီလီမီတာဒူးခရီး - ၃၇၀ မီလီမီတာသတ်မှတ်ထားသောစွမ်းအား - ၅HP ဗိုင်းလိပ်တံကျုံ့: NT40 မြန်သောအစာ: ၅/၅/၅ M / min 6KJ-B ဒူးအမျိုးအစား NC အသိဉာဏ် mini cnc ကြိတ်ခွဲခြင်း စက်ရုံစျေးနှုန်း 1. နှင့်အတူစက်ပူးတွဲအသိဉာဏ် Controller ကိုပိုမိုအသုံးပြုသူဖော်ရွေ applications များရှိသည်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၂။ NC Milling Machine 6kj-b အိပ်ရာ၏ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်သည်မိမိကိုယ်ကိုတီထွင်ထားသော jyd400m system ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Z axes servo motor motor ဖြင့် ၄။ program တည်းဖြတ်ခြင်းကိုတိုက်ရိုက် ...
Controller System နှင့်အတူ 1800kgs အလေးချိန် CNC ဒေါင်လိုက်တူးဖော်စက် 6KJ - B
အမည်: Controller System X / Y / Z Axis ခရီးသွားခြင်းနှင့်အတူ 6KJ-B: 800/310 / 110mm စားပွဲတင်: 1370 * 330mm T-Slot: 16 *3* 68mm အရွယ်အစား: 2100 * 1750 * 2450mm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: NT40 1800kg အလေးချိန် CNC ဒေါင်လိုက် Controller System နှင့်အတူကြိတ်စက် 6KJ-B ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်: ၁။ ကြိတ်ခွဲခြင်းခေါင်းစဉ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် 5HP ကြိတ်ခွဲခြင်းခေါင်းကိုရွေးသည်။ ၂။ 5HP ကြိတ်ခွဲသောခေါင်းသည် 3HP ကြိတ်ဆုံခေါင်းထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်၊ ၎င်းသည်စက်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာနှင့်အကျိုးရှိစေနိုင်သည်။ ၃။ ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် ... ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
မြင့်မားသော Wear ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် CNC ဒေါင်လိုက်စက်မှသတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း 3HP Motor အတွက်
Spindle Quill ၏အချင်း: 110mm Spindle Quill: Spindle နှင့် Table ကြားတွင် 150mm Max Distance: 430mm Spindle Taper: NT40 Dimension: 1900 * 1750 * 2450mm အလေးချိန်: 2200kgs အရောင်: Optional Preicision: High Precision 3HP မော်တာအထူးဒီဇိုင်း NC ကြိတ်ခွဲစက် အပြောင်းအလဲနဲ့ 1. Japanese nsk တိကျသောအံနှင့် Hsong Tong Xiang / Hong တိုင်ကောင်းမွန်သောဘောလုံး ၀ င်ရိုး
ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက် 8m / Min လျင်မြန်စွာကျွေးသော Benchtop ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက်
အမည်: CNC စက်စက် 6KJ-BX ဝင်ရိုးတန်း - ၈၀၀mm Y ဝင်ရိုး - ၃၁၀ မီလီမီတာ Z ဝင်ရိုးတန်း - ၃၁၀ မီလီမီတာဒူးလည်ပတ် - ၃၇၇ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ Taper: NT40 NT40 ၃.၇kw ဗိုင်းလိပ်တံဒေါင်လိုက် CNC စက်စက် 6KJ-B 800mm ၀ င်ရိုးခရီးသွားကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက် - 1 ။ စက်တွင်သံခုန်သံစွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုး၊ ဒေါင်လိုက်ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ အလျားလိုက်ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ပျင်းစရာကောင်းခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသော bevel၊ helical မျက်နှာပြင်၊ တုတ်ကျင်း၊ arc-shaped groove၊ ဂီယာ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သင့်လျော်သော ...
3 Axis CNC ဒေါင်လိုက်စက်မှ 600 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ဒေါင်လိုက်ဒူးခေါင်းကြိတ်စက်
X / Y / Z ခရီးသွားခြင်း: 800 * 420 * 500mm တည်နေရာတိကျမှု: 0.02 / 0.02 / 0.02mm ထပ်မံတည်နေရာတိကျမှု: 0.015 / 0.015 / 0.015mm ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ: 5HP အလေးချိန်: 1900kgs မက်စ်။ Table of Load: ၆၀၀ ကီလိုဂရမ် XP ပလက်ဖောင်းမြင့်မားသောတိကျသည့် CNC ကြိတ်စက်နှင့်ဘောလုံးဝက်အူ 84KJ-B ၁ ။ 2. X / Y / Z ပုဆိန်ဘောလုံးကိုဝက်အူချမှတ်။ ၃။ NC Milling Machine 6kj-b bed ၏ configuration system ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သော jyd400m system ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။